U-Anna Sedokova utshele ukuthi kungani ebekezelele ubuhlobo obubuhlungu - Bonisa Ibhizinisi 2022
U-Anna Sedokova utshele ukuthi kungani ebekezelele ubuhlobo obubuhlungu
Umculi u-Anna Sedokova waveza imizwa yakhe futhi wavuma ukuthi kwenzekani emphefumulweni wakhe. Ngokokuqala ngqá, lesi sihlabani sakhuluma ngokungagwegwesi ngobuhlobo nendoda eyamlimaza kakhulu.
Impilo yomculi u-Anna Sedokova ayigcwalisiwe nje kuphela ngezikhathi ezikhanyayo, kodwa futhi nezinkumbulo ezingathandeki. Lo mlingisi oneminyaka engu-35 ubudala unedivosi ezimbili kanye namanoveli ambalwa angaphumelelanga ngemuva kwamahlombe akhe.
Manje u-Anna ukhulisa amadodakazi amabili - u-Alina oneminyaka engu-13 ubudala noMonica oneminyaka engu-6 ubudala, kanye nendodana enezinyanga ezingu-9 uHector. Kodwa umculi akazange akwazi ukusungula ukuphila kwakhe siqu. Ukhulisa izingane yedwa.
Muva nje, u-Sedokova wabhala ku-Instagram isichasiselo se-albhamu yakhe entsha ethi "Free", lapho ekhuluma khona indaba yobuhlobo obubuhlungu nendoda ehlukumezayo.
Nganginobudlelwano, engangingakwazi ukuphuma kubo, njengakumanethiwekhi. Wangicasula, wabe esecela intethelelo. Wangilimaza, wangilulaza, kodwa wabe esezehlisa futhi wangicela ukuba ngimbuyisele konke. Ngaqonda konke, kodwa ngangingazi ukuthi kungani ngingasuki. Wathethelela zonke izinyathelo zakhe ngokwehluleka kwakhe noma impilo yakhe enzima. Wangibamba wangiqinisa. Wayenezingalo eziqinile kanye nomlingiswa oqinile wesilisa. Ngikhumbula ukuthi ngabona kanjani ukuthi kufanele ngigijime. Zisindise. Manje noma ungalokothi. Ngathatha i-passport yami, ngagqoka amabhuzu ami okuqala kanye ne-sweatshirt. Ngibone onogada bemshayela ucingo bethi ngiyahamba. Ngangazi - nginemizuzu eyishumi, imizuzu eyishumi lapho ezojikisa imoto yakhe ngasekhaya futhi angangivumeli ngihambe. Manje noma angisoze ngasithatha isinqumo. Ngaphuma ngabaleka, ngashiya yonke into, impilo yami yonke, izingubo, izimonyo, izincwadi … ngahamba ukuze ngiphile
- kusho u-Anna.
Lo mculi akazange alisho igama lalowo abhala ngaye. Kodwa abalandeli bakaSedokova bayaqiniseka ukuthi leli soka elinolaka lingaba ubaba wengane yakhe yesithathu, usomabhizinisi u-Artem Komarov.
Isizathu salokho okucatshangelwayo yingxoxo no-Anna ngokwakhe, lapho aveza khona ukuthi yonke into ebuhlotsheni bakhe no-Artyom yayingeyona ibushelelezi njengoba ayefuna.
Ngingasho ukuthi namuhla senze isinqumo sokuthi singadluleli phambili ndawonye. Futhi lesi sinqumo senziwe yithi ndawonye. Inzima indaba, inzima nje kunezindaba zami zonke phambilini
- ke inkanyezi yavuma.
Izindebe ezomile neziqinile: ukuthi ukunakekelwa kwezindebe zasebusika kufanele kube njani
Indlela yokuthuthukisa isimo sezindebe zakho ebusika? Ingabe i-chapstick eyodwa yanele? Sikutshela ukuthi yini okufanele ibe ukunakekelwa kwezindebe eziqhekekile ebusika, yimiphi imikhiqizo ezodingeka ezindebeni eziqhekekile nokuthi ungazisebenzisa kanjani